PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - AKAYINGENI EYOKUBA NENKAMPANI YOKUQOPHA
AKAYINGENI EYOKUBA NENKAMPANI YOKUQOPHA
Ilanga - 2018-02-15 - Relationships & Love Issues - LUCKY CAIN
ASIZIMISELE ngokulandela ezinyathelweni zikazakwabo isilomo sikaDJ wodumo lweDurbans' Finest, uMbusi Sokhela.
USokhela, odume ngelikaDJ Sox, ungomunye wababongwe kakhulu yiDistruction Boyz emcimbini obuseThe Joint ngeledlule lapho belibungaza ukuhlabana ngendondo yaseNigeria nokudayisa i-albhamu ifinyelele kwigolide.
Kulo mcimbi amalungu eDistruction Boyz, uThobani “Que” Mgobhozi noZipho “Goldmax” Mthembu, aphinde ethula namaciko angaphansi kwenkampani yawo, iDistruction Boyz Records. Abonge uDJ Sox ngokudlala indima ebalulekile ekubakhuliseni nokubathuthukisa kulo mkhakha.
Ekhuluma neLANGA ngokusiza leli qembu, uDJ Sox udalule ukuthi okwakhe kube wukuthanda umsebenzi wabo kwazise uyazifela ngokudlala igqom ezindaweni zobumnandi.
“Mina bengisiza izintwana ezinekhono njengoba umculo wabo bengihlale ngiwuthola ngase ngiba nentshisekelo yokwazi laba bafana abenza igqom elimnandi kanje,” kuchaza uSox enanela ngokuthi nguyena obethule enkampanini kaMampintsha, iWest Ink.
“Yimina obaxhumanise noMa- mpintsha ngoba ngibona ithalente abanalo lokushaya isigubhu,” kusho uSox.
USox utshele leli phephandaba ukuthi akazimisele ukusungula inkampani yokuqopha umculo.
“Ngeke sonke sidayise isinkwa. Kuhle okwenziwa ngabanye oDJ, ukuvula izinkampani zokuqopha kodwa mina angizimisele ukuhamba kulowo mgudu,” kucacisa lo DJ oyilungu leDurbans' Finest ehlanganise yena noDJ Tira onenkampani yokuqopha umculo, i-Afrotainment.
USox uthi usezinhlelweni zokukhipha i-albhamu kulo nyaka njengoba sekuneminyaka agcina ukukhipha ezimele yedwa.
“Sengiqalile ukuqopha izingoma ezizoba kule albhamu,” kuphetha uDJ Sox.
UDJ Sox uthi akazimisele ngokulandela ezinyathelweni zabanye oDJ asebemnkantshubomvu ngokuvula inkampani yokuqopha umculo.